Soosaaraha Shiinaha iyo Mashiinka Mist Mashiinka iyo Warshadaha | Zhongmaohua
1. Qiiqa iyo qiiqa biyaha waxaa xaqiijiya nozzles gaar ah, oo saameynta qiiqa iyo qiiqa biyaha ay fiican yihiin. Ku rakib tuubbada qiiqa qiiqa, qiiqa wuu weyn yahay, saameynta qiiqa ayaa ka fiican, qiiqauna wuu cufan yahay; ku rakibida tuubbada qashin-qubka biyaha, qashinka ceeryaanta qulqulka biyaha ayaa si aad ah u faahfaahsan oo labis ah, walxaha qulqulaya ayaa si wanaagsan u sabbaynaya, saamaynta daroogada waa mid waara, iyo saameynta kahortagga ayaa ah mid cajiib ah, Saamaynta codsiyada buufinta mugga dhabta ah ee dhabta ah.
2. Dhexroor ka sameysan qashinka mashiinka xashiishka wuxuu ka yar yahay 30 micron. Miisaan culus darteed dartiis, walxaha qalalan ee aadka u culus ayaa si dhib yar u saameeya cufnaanta. Si deg deg ah uma degganaan doonto xaalufka culus sida dhibco-biyoodka ay soo saareen murrashaxiinta dhaqanka. Waxay dul sababeysaa, baahisaa, oo si fiican u galaa. Waxay fidin kartaa oo hawada ku jiri kartaa muddo dheer. Qiiqa soo galaya waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay wax la arki karo. Ku habboon iskuulada, isbitaalada, makhaayadaha, Faafinta iyo jeermis-ka-qaadista meelaha dadku ku badan yihiin sida hoteelada, warshadaha madadaalada, tiyaatarada, gawaarida tareenka, diyaaradaha, maraakiibta, basaska, iyo gaadiidka kale ee dadweynaha; saldhigyada, garoomada diyaaradaha, docks; Jardiinooyinka, meelaha la deggan yahay, suumanka cagaaran, rugaha wareejinta qashinka, qashin-qubka Ka hortagga iyo xakamaynta kaneecada, duqsiyada, baranbarada iyo nooleyaasha kale ee dhirta, beeraha, bullaacadaha magaalada iyo kanaallada kululaynta, sagxadaha, mashaariicda difaaca cirka rayidka, iwm, si looga hortago faafitaanka qandho dengue ama bakteeriyada iyo cudurada faayraska; Xakamaynta cayayaanka iyo jeermis-dilaaga warshadaha kaydinta iyo saadka
3. Beeraha buufiyaha waxaa si weyn loogu isticmaalaa suufka, qamadiga, bariiska, galleyda iyo dalagyada kale, dalagyada cagaaran ee dhirta lagu koriyo, geedaha miraha, kaymaha (kaymaha dhaqaalaha, beero magaalooyinka, xannaanooyinka ubaxa), jardiinooyinka shaaha iyo dhir kale oo loogu talagalay xakamaynta cayayaanka iyo dalagyada bacriminta wax ku oolka ah. ; Aag ballaaran Ka hortagga cudurrada iyo cayayaanka cayayaanka daaqa;
Hore: Difaaca Suudka Dharka Dharka Difaaca ee la tuuri karo
Xiga: Suuqa Macaamiisha Gaarka ah ee Lagu Farsamo Suuqa Jumladaha ah ee Aan Joogsanayn 3 Waji Mashiin